FBC - Wixineen seeraa Oromiyaan faayidaa Finfinneerraa argattu murteessu qophaa’uun himame
Wixinee labsii - gareewwan shororkeessummaatti himatamanii turanii araara kennisiisu- irratti mariin geggeeffame
Milkaa’ina hiriira boruuf ummatni nageenya ofii akka eeggatu mootummaan hubachiise
Naannoon Kibbaa namoota miidhan irra gaheef deeggarsa kan godhu ta’uu beeksiise
Arbanyooch Ginboot Sabaat sochii nagaan-alaa bifa kamiiyyuu dhaabuu isaa beeksise
Saalvaa Kirii fi Riik Maachaar torbee dhuftu irra deebin wal argu
Wixineen seeraa Oromiyaan faayidaa Finfinneerraa argattu murteessu qophaa’uun himame
Finfinnee, Amajjii 1,2009(FBC) – Wixineen seeraa faayidaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argachuu qabdu murteessu qophaa’uusaa muumichi ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany ibsa har’a gaazexeessitootaf laatanirratti himan.
Preezdaantiin Ityoophiyaa Dooktar Mulaatuu Tashoomaa sirna baniinsa mana mareerratti haasaa taasisanii turaniin, naannoon Oromiyaa faayidaa magaalattiirraa argachuu qabdurratti seerri qophaa’ee barana akka ragga’u ibsuun isaanii ni yaadatama.
Haaluma kanaan wixineen seerichaa qophaa’ee qaamolee addaddaa waliin, ummata dabalatee mariin ega irratti taasifameen booda kan ragga’u ta’a jedhan muummeen ministiraa.
Faayidaa naannoon Oromiyaa fi ummanni Oromoo magaalaa Finfinneerraa argachuu qaburratti heerri biyyattii kan tumu ta’us, seerri isaa garuu amma ammaatti osoo hin qophaa’in turuusaa obbo Haaylamaariyaam ibsaniiru.
Faayidaa addaa kanarratti amma seerri ba'utti hin turree jedhamanii gaazexeessitootan kan gaafataman obbo Haaylamaariyaam, preezdaant Dooktar Mulaatuun baranaaf beellama akka qaban yaadachiisanii, of eeggannoon qophaa'uu waan qabuufis amma ammatti tureera jedhan.
Seericha baasuurratti garuu wanti wal nama gaafachisu hin jiru; heera biyyattiirratti tumameeratii jedhan obbo Haaylamaariyaam.
Mootummaanis tumaa heera biyyattiirra jiru kana hojiirra oolchuuf labsii nan baasa jedheet ture. Haaluma kanaan mariin wixinicharratti ega taasifameen booda ni ragga'a jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Waliigalteen teeknooloojii dhaabbilee barnoota olaanootti babal’isu mallatteeffame	Hojiin misooma sululaa eegalame »
Fayyadamtootni Inistaagiraamii biliiyoona 1 gahan